အရောင်းအဝယ်မအောင်မြင်တဲ့ နောက်ပိုင်း Soho ရဲ့ တရုတ်စတော့ရှယ်ယာ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားပြီးနောက် သူဌေးက Pan Rock ကို အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ? - Pandaily
အရောင်းအဝယ်မအောင်မြင်တဲ့ နောက်ပိုင်း Soho ရဲ့ တရုတ်စတော့ရှယ်ယာ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားပြီးနောက် သူဌေးက Pan Rock ကို အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
တရုတ်မီဒီယာများ တင်ပို့မည်Dicha တစ္ေယာက္တနင်္လာနေ့ကရေးသားခဲ့တဲ့ Soho ရဲ့ တရုတ်အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းဟာ ဆိုင်ဖွင့်ရက်တစ်လျှောက်လုံး သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး ဆက်လက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ နေ့လယ်ခင်းပိတ်ချိန်အထိ အစုရှယ်ယာ စုစုပေါင်း ၃၄.၈၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ပြီး ရှယ်ယာဈေး နှုန်းကတော့ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂.၂၈ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခ်ိန္က ကုမၸဏီ၏တန္ဖိုးသည္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၁၁၈.၅၅ သန္း (ေဒၚလာ ၁၅.၂၄ သန္း) ရွိခဲ့သည္။
လတ်တလောရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတာက Soho တရုတ်အပြင် ကုမဏီက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အယ်လ်ပန်ရှီနဲ့ Zhang Xin စုံတွဲရဲ့ အခြေအနေကိုဆက်စပ်နေပါတယ်။
စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က Soho China က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုအရ Black Rock Group ႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔အၾကား ဝယ္ယူမႈရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အထက္ပါေျပာၾကားခ်က္ကျောက်မည်းအုပ်စုဖြစ်ရေး မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးသည်ကုမ္ပဏီဟာ ရှယ်ယာဝယ်ယူဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ဇွန်လအတွင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော တရုတ်အစိုးရပိုင် Soho ၏ ကြေညာချက်တစောင်တွင် မှောင်ခိုကျောက်များကို အလုံးစုံဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ ဝယ်ယူရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် အစုရှယ်ယာ တခုလျှင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၅ သန်းနှင့် Soho China Holdings ၏ ဝယ်ယူမှု စုစုပေါင်းမှာ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂၃၆၅၈ သန်းအထိ ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ရခိုင်ကုန်သွယ်မှု ပြီးဆုံးပါက Soho သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ စာရင်းဝင် အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိ ဦးပိုင်ရှယ်ယာရှင် ၉ ရာခိုင်နှုန်း အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်ထားမည် ဖြစ်သည်။
အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လဲ ရှယ်ယာတန်ဖိုးတွေ ကျတော့လဲ ကျတော့လည်းကျတော့၊ Pan Rock နဲ့ Zhang Hin က အခုကျတော့လဲ ကုမ္ပဏီကို ဘယ်လိုခေါ်သွားမလဲ?
လက်ရှိမှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မပန်းအိက အိမ်ထောင်သည်သုံးယောက်ကို လမ်းကြားမှာသွားလာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ပါ တယ်။ ပထမက ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္မယ့္ကုမၸဏီပါ။ ဒုတိယက ေဖာင္းကားေရာင္းတယ္။ တတိယအချက်ကတော့ စီးပွားရေးသမားတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲ Single House အလုံးစုံကို ရောင်းချခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သူတို့စုံတွဲကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်မယ့် ကုမ္ပဏီကို ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းနှစ်ခုကို ဖြတ်သန်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအချက်အနေနဲ့ Pan Rock နဲ့ Zhang Hin တို့ကို အစုရှယ်ယာ အဖြစ် ပြန်လည်ဝယ်ယူမှာဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်မှု ပြီးစီးပါက အစုရှယ်ယာ ပြန်လည်ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒါမှမဟုတ် ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေဂျင်စီတွေကို ရှာဖွေနေပါတယ်။
ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဒီလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုဟာ အနာဂတ္ကို မေရမရာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ပထမအချက်အနေနဲ့ Pan Rock နဲ့ Zhang Hin တို့ ရှယ်ယာတွေကို ပြန်ဝယ်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ငွေတွေကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အေဂျင်စီတခုဖြစ်သော Black Rock Soho က တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုကို လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ကြီးကြပ်မှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်နိုင်ခြေ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဒါဟာ ျပည္တြင္းအရင္းအႏွီးကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ဖို႔ သတိေပးလိုက္တာပါပဲ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ Soho က တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Transition Programme ကို ကြေညာပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းရောင်းချကာ အငှားဈေးကွက်ကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ သို႔ေသာ္ ၎၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အငွားခ်သည့္ ပံုစံသည္ ၾကာရွည္မခံဘဲ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ေစၿပီး အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစပြီး ကုမ္မဏီဟာ အဆောက်အအုံအများအပြားကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
Soho ရဲ့ သုံးသပ်ချက်အရ တရုတ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် တခုအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတခုလို့ ယူဆရပြီး သူ့ရဲ့ ၂၀၁၂ အသွင်ကူးပြောင်းရေး မူဝါဒဟာ မမှန်ကန်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သည်လိုပြဿနာတွေကြောင့် စီမံကိန်းတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်တာ၊ ဈေးကွက်အတွင်း အပြိုင်အဆိုင် ငှားရမ်းတာတွေကြောင့် ဈေးကွက်ပျက်ယွင်းတာ၊ အငှားမူဝါဒပျက်ယွင်းတာ၊ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာတာ တွေကို ရှင်းလင်းဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေရလမ္းေၾကာင္းက အရင္နဲ႔မတူပဲ ေရာင္းရကျိုးနပ္ေနၿပီ၊ ဒါပန္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းပဲ” ဆက်လက်၍ ၎င်းက “လက်ရှိအနေအထားအတိုင်း ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်၊ အခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေဂျင်စီတွေကို ရှာဖွေတယ်၊ ပြီးတော့ အဆောက်အအုံတစ်ခုချင်းစီမှာ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေရောင်းချခဲ့သလို Soho ရဲ့ တရုတ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း မကြာသေးမီနှစ်တွေအတွင်းက ရောင်းချခဲ့သလိုမျိုး ပိုင်ဆိုင်မှုတချို့နဲ့ အမြတ်အစွန်းတွေလည်း များပြားခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
လက္ရွိတြင္ Soho သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမာခံပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေပက်င္းႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းတို႔တြင္ တည္ရွိသည့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းရွစ္ခု၏ စုစုေပါင္းဧရိယာသည္ စတုရန္းမီတာ ၇၉.၇၄ သန္း က်ယ္ဝန္းသည့္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ ငွားရမ္းတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။
Topics: မြင်ကွင်းTencent ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ပလက္ေဖာင္းကို ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ အခြံမ်ားရွာေဖြရန္ အစီအစဥ္အတြက္ အေမရိကန္တြင္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ၁ ဒသမ ၁ သန္းအထိ အရြယ္အစားရွိ
စီးပွားရေးအလျင်အမြန်ပြန်လည်ဦးမော့လာသည်နှင့်အမျှ ရုံးခန်းလိုအပ်ချက်များ စတင်ကြီးထွားလာပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီများ၏ နေထိုင်မှုနှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၎၏ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္ အထိ Soho သည္ တ႐ုတ္တြင္ တည္ၿငိမ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ပ်မ္းမွ်အငွားအိမ္ခန္းငွားရမ္းခႏႈန္းထားကို မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဒါေပမယ့္ Soho ကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနဟာ အလံုးစံု မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနပံုရပါတယ္။ ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းအထိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ချုပ်စာရင်းများအရ ချေးငွေစုစုပေါင်း ၁၈.၄၇၀ သန်းရှိပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် နှစ်နှစ်အတွင်း သန်း ၁၀၁.၂ သန်းခန့်ရှိရာ လာမည့်နှစ်နှစ်အတွင်း သန်း ၁၆.၆ သန်းခန့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည် ဖြစ်သည်။ အသားတင္လက္က်န္က ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေငြေခ်းယူစရိတ္က ၄.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။